BUDDHIST TERMS' Dictionary: NOVICE-TO-BE - ပဏ္ဍုပလာသ
NOVICE-TO-BE - ပဏ္ဍုပလာသ
ပဏ္ဍုပလာသ - သာမဏေလောင်း၊ ရှင်လောင်း။
ရှင်သာမဏေပြုမည့်သူသည် ရှင်သမဏေ မပြုမီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ နေလျက် သင်္ကန်းတောင်း, သီလတောင်း, လိင်, ဒဏ်, သေခိယ, စုဒ္ဒသခန္ဓက၀တ် စသည်တို့ကို ကျက်မှတ်သင်ယူလေ့ ရှိကြသည်။
ရှင်လောင်းဟူသည် ရဟန်းတော်များအတွက် လှူဒါန်းထားသော စားဦးစားဖျားကို ရထိုက်သူဖြစ်၏။
ရှင်ပြုမည့်နေ့တွင် မင်းညီမင်းသား အ၀တ်အစားဖြင့်ဆင်ယင်၍ ဆင်မြင်းများအပေါ်တင်လျက် ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ပို့ဆောင်လေ့ရှိကြသည်။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်က ပဏ္ဍိတ၊ တိဿသာမဏေများနှင့် ဓမ္မဒိန္နာသာမဏေရီတို့ကို ဘုရားကျောင်းတော်သို့ ခမ်းနားစွာ ပို့ဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
Postulant, candidate for the state ofanovice
One who is to be ordained asasᾱmaṇera learns the formula for requesting the robes and the precepts, the liṅgas and the daṇḍas, the sekhiyas and khandhaka vattas by heart while staying at the monastery. He is worthy of taking ahead of others the food meant for bhikkhus. On the day of his ordination he is dressed asaprince, put on the back of an elephant orahorse and taken to the to the monastery inagrand precession. During the Buddha’s lifetime the sᾱmaṇeras Paṇḍita, Tissa and others and the sᾱmaṇeri Dhammadinnᾱwere sent in pomp and grandeur to the Buddha’s monastery.